Konke Okudingeka Ukwazi Ngomama Wokuqala waseMelika, uJill Biden - Abaphumelele
Everything You Need Know About America S First Lady
indlela yokukhulisa izinwele ngokushesha amakhambi asekhaya
Isithombe: Jill Biden / Instagram
Okhethweni lukaMongameli lwakamuva lwase-United States Of America, izwe lakhetha uJoe Biden kwiHhovisi le-Oval. Unkosikazi kaBiden uJill Biden uthathe isikhundla sokuba yi-First Lady yezwe kuMelania Trump, kanti lezi zithandani sezingene eWhite House.
UJill Biden uphinde wasebenza njengeNkosikazi Yesibili yase-US ngo-2008-2016, lapho umyeni wakhe eyiPhini Likamongameli waseMelika nabaphathi bakaBarack Obama.
Isikhundla sikaNkosikazi kaMengameli besilokhu sihilela unkosikazi kamengameli ukwakha izinhlelo ezintsha maqondana nezimbangela abazithandayo. Le ndima idinga ukuthi abe sohlangothini lowakwakhe futhi ameseke ngesikhathi esesikhundleni. UJill Biden ungowesifazane oguqukayo obengummeli wemfundo namalungelo alinganayo. Wayephinde abe ngumlingani wokuqala wephini likamongameli ukugcina umsebenzi okhokhelayo esikhathini sakhe sonke. Nazi izinto ezithokozisayo ngoNks Biden okufanele wazi.
isisindo samafutha ekhaya
Wazalelwa eNew Jersey ngo-1951, futhi wakhulela ePhiladelphia nodadewabo abancane abahlanu. Wenza isiNgisi e-University of Delaware kusukela lapho, usechithe amashumi eminyaka enguthisha okhuluma isiNgisi futhi ekhuluma emakolishi amaningi omphakathi nasezikoleni eziphakeme zomphakathi. UJill uphinde wafundisa intsha esibhedlela sabagula ngengqondo.
amakhambi asekhaya okukhula kwezinwele ezimnyama
UJill uzuze ama-masters degree amabili esiNgisini nasekufundeni, waphinde wathola iziqu zobudokotela ebuholini bezemfundo ngo-2007. Ngenkathi enza iziqu ze-bachelor, uJill washada noBill Stevenson ngo-1970, kodwa bahlukana ngo-1974 ngemuva konyaka, wahlangana noSenator wase-US owayesanda kuqanjwa ngaleso sikhathi. UJoe Biden. Ngemuva kweminyaka embalwa, uJill wamshada ngoJuni 17, 1977. Ngemuva komshado, uJill wathatha ikhefu ekufundiseni ukuze akhulise amadodana akhe amabili nendodakazi yakhe uJoe.
Indima Yakhe NjengoMama Wesibili
Ngenkathi uJoe Biden esebenza njengePhini likaMongameli kusuka ngo-2008-2016, uJill Biden naye wenza imisebenzi yakhe njengoMama Wesibili, okwakusho ukuxhasa izinhlelo zikaNkosikazi Wokuqala nokusiza ukukhankasela abazongenela ukhetho lweDemocratic ngesikhathi sokhetho lwaphakathi nonyaka. Ubengowesifazane wokuqala wesibili ukuqhubeka nokufundisa ekolishi lomphakathi. UMongameli uBarack Obama naye umcele ukuthi anyuse amakolishi omphakathi, futhi ukuvakasha kwakhe okuningi njengoMama Wesibili bekubandakanya ukuhambela lezi zikhungo.
itiye eliluhlaza lisebenzisa imiphumela engemihle
Izinhlelo Zakhe NjengoMongameli Wokuqala
UJill Biden wenyusa ukuzibandakanya kwakhe kwezepolitiki emkhankasweni ka-2020 womyeni wakhe, wathatha ikhefu ekufundiseni ukuze amjoyine emkhankasweni womkhankaso ngokugcwele, yize aqhubeka nokubamba iqhaza ezinhlelweni zokuqeqesha online. NjengoMongameli wokuqala, uzoqhubeka nokukhuthaza izizathu ezifanayo azisebenzisile njengoMama Wesibili. Imfundo kanye nemindeni yezempi kuzoba yinto ephambili kuye. UJill Biden uhlela nokubuyela esikhundleni sakhe njengoprofesa eNyakatho Virginia Community College.
Funda futhi: I-5 Times Kamala Harris Isikhuthaze Ukuba Sibe Ngowesifazane Oyiqiniso
imiphumela emibi ye-baking soda ebusweni
isitayela sezinwele zangaphambili ekhaya
amathiphu enziwe ngobuso obukhazimulayo
okunye ukuzivocavoca ukunciphisa isisu
amathiphu wokunakekelwa kwezinwele zemvelo amakhambi asekhaya okukhula kwezinwele